အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ရှောင်သင့်၊ ဆောင်သင့်၊ ပြင်ဆင်သင့်၊ ပြုလုပ်သင့်သည့် အချက်များ။ (ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ။ လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါ)။ | နစ်နေမန်း
အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ရှောင်သင့်၊ ဆောင်သင့်၊ ပြင်ဆင်သင့်၊ ပြုလုပ်သင့်သည့် အချက်များ။ (ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ။ လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါ)။
အကြမ်းဘက်တဲ့ ရန်သူအပေါ် ခုခံကာကွယ်ရန်နှင့် တုန့် ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဘက်တာကို ခုခံကာကွယ်တုန့် ပြန်ခြင်းသည် လူသားတစ်ဦးအတွက်ရော လူ့ ဘောင်အဖွဲ့ အစည်းအတွက်ရော ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ တရားသော လုပ်ဆောင်မှု ဖြစ်တယ်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ အရေးပေါ် ပြင်ဆင်မှုတွေကို စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားသင့်သလို့အခြားသူများအတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်ပါတယ်။
အရေးပေါ်အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားခြင်း။
၁။ ရေဗူးများ ဆောင်ထားရပါမယ်။ သောက်သုံးရန်အတွက်သာမက မျက်နာကျင်ခြင်း၊ ဒါဏ်ရာရရှိခြင်း၊ အပူလောင်ခြင်းတို့ တွင် ဆေးကြောသုတ်သင်ရန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ထူထပ်၍ ခိုင်မာသော လက်အိတ်များများ ဆောင်ထားရပါမယ်။ အပူ၊ ထိခိုက်မှု၊ ဆေးဝါးဓါတုပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန်သာမက မိမိရဲ့ လက်ဗွေရာများ မကျန်စေရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အရေးပေါ်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လက်ကိုင်ဖုန်း (သို့ ) ပြည်သူပိုင်ဖုံးတို့ တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရပါမယ်။
၄။ ရှေးဥိးသူနာပြုနှင့်ပတ်သက်သော ဆေးဝါးကိရိယာများကို မိမိယူဆောင်လို့ ရနိုင်သည့် တနိုင်စာအား ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ အ၀တ်စ၊ ပတ်တီး၊ အရက်ပြံ၊ ဂွမ်း၊ ကတ်ကျေး၊ ချူပ်အပ်၊ ချူုပ်ကြိုး၊ အနာကျက်ဆေး၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး စသည်တို့ ကို ဆောင်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဆွဲကြိုး နာရီ အစရှိသည့် ရန်သူမှ အလွယ်တကူ ဆွဲမိနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ ၀တ်ဆင်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ထို့ အတူ မိမိတို့ဆံပင်အရှည်များကိုလည်း ထုံးဖွဲ့ ထားပါ။
၄။ ဂွင်းထိုးဖိနပ်များ၊ သားရေဖိနပ်များ၊ ကြိုးချီဖိနပ်များ ၀တ်ခြင်းအား ရှောင်ကြဉ်ပါ။ မိမိခြေထောက်အား အကာအကွယ်ပေးသည့် အလွယ်တကူ မကျွတ်ကျနိုင်သည့် ပြေးလွှားရာတွင် ပေါ့ပါးသည့် ဖိနပ်မျိုးကိုသာ ၀တ်ပါ။
၅။ မိမိလက်တစ်လျောက်၊ လည်ပင်းတစ်ဝိုက်၊ ခြေထောက် အသားအရေများအား လုံခြုံစွာ ဖုံးထားနိုင်သည့် အင်္ကျီလက်ရှည် ဘောင်းဘီရှည်များကို ၀တ်ဆင်ပါ။ ပုဆိုးများ ၀တ်ဆင်ခြင်းကို အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့် နေရာများတွင် မ၀တ်ဆင်သင့်ပါ။
၁။ မျက်စိအကာအကွယ်ပစ္စည်း (Goggles) – မျက်မှန်ကဲ့သို့မျက်စိအား ဖုံအုပ်ထားပေးသော ရေကူးရာတွင်သုံးသည့် မျက်စိကာများ။ မျက်စိအကာသည် မှန်ထက် ပလတ်စတစ်က ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ မီးခိုးငွေ့ များ၊ ဓါတုဆေးများအား ကာကွယ်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ် အကာအကွယ်ပစ္စည်း (Mask) – နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်အား မီးခိုးငွေ့ များ၊ ဓါတုဆေးများအား ကာကွယ်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးအား (မျက်စိနှင့် နှာခေါင်းမှ အပ) ဖုံးထားနိုင်သည့် ခေါင်းစွပ်များကိုလည်း မျက်စိကာ နှာခေါင်းကာများဖြင့် တွဲဘက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုသင့်တော်ပါတယ်။ နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်အား မီးခိုးငွေ့ များ၊ ဓါတုဆေးများအား ကာကွယ်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ အတူ မိမိအား ရန်သူမှ မည်သူမှန်း မသိစေရန် ကာကွယ်နီုင်ပါတယ်။ သို့ သော် မိမိတစ်ဦးတည်း ထီးထီးမြင်နေရချိန်တွင် ရန်သူမှ အာရုံစိုက်မိစေရန် အလျင်စလို မသုံးသင့်ပါ။ ရုန်းရင်ဆန်ခတ်မှု ဖြစ်ခါနီးနှင့် မျက်ရည်ယိုဗုံး ဓါတုဆေးများအား ရန်သူမှ သုံးလာလျှင် ၀တ်ဆင်သင့်ပါသည်။
၄။ ဦခေါင်းအား အကာအကွယ်ပေးသည့် ပစ္စည်းများ – ဦးထုတ်အမာ၊ ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုတ်များအား ၀တ်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။ ရန်သူမှ ဒုတ်ဖြင့်ရိုက်မှု၊ မိမိဘာသာ ချော်လဲကျမှုကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သည့် ဦးခေါင်းဒါဏ်ရာရမှုအား ကာကွယ်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အ၀တ်အစား အပိုတစ်စုံအားလည်း ဆောင်ထားသင့်ပါသည်။ ရုန်ရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုကြောင့် ပျက်စီးပေကျံသွားသော အ၀တ်အစားအား လဲလှယ်ပြီး ရန်သူအား ခြေရာဖြောက်နိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ အတူ သွေးထွက်ဒါဏ်ရာအားလည်း ပတ်တီးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အထက်ဖေါ်ပြပါ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများကို ဆောင်ထားဝတ်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင် မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ဓါတုဆေးအန္တရာယ်များကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ဓါတုဆေးအန္တရာယ်များဟာ ရန်သူဘက်မှ ယာယီသုံးစွဲတဲ့ဟာ ဖြစ်လို့ဒီအကာအကွယ်တွေသာ မိမိဘက်မှ လုပ်ထားလျှင် အရမ်းကြောက်ရွံ့ စရာ မလိုဖူးဆိုတာ သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
၃။ ရှေ့ တိုးခြင်း နောက်ဆုတ်ခြင်းကို မိမိတို့လူများ အတူတူ ညီညီညာညာ တိုင်ပင်ကိုက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပါက ရန်သူဘက်က အလွယ်တကူ ဖြိုခွဲနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ရန်သူသည် မိမိတို့ဘက်မှ ရဲရဲဝန့် ဝန့် နှင့် ညီညီညာညာတုန့် ပြန်မှုအား ကြောက်ရွံ့တတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးက ဖောက်၍ ပြေးပါက ပြိုကွဲကာ ထွက်ပြေးသူ နောက်အားလည်း ပိုမဲ၍ လိုက်လံခြေမှုန်းတတ်သည်ကို သတိထားရန် လိုပါတယ်။
၄။ လှုပ်ရှားမှု စတင်ရန်အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခြေအနေအားလုံးအား ဖြစ်နိုင်ခြေမှန်သမျှအား ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ လိုအပ်သော ပြင်ဆင်မှုအားလုံးကို စနစ်တကျ တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ အဖွဲ့ လိုက်ဖြစ်စေ စီစဉ်မှုပြုလုပ်ရန် လိုပါတယ်။
၁။ မိမိတစ်ဦးတည်း ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြေးခြင်း၊ အများ၏ ဆန္ဒနှုင့် မကိုက်ညီသော ပြောဆိုမှု လုပ်ဆောင်မှုမျိုး မပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပါတယ်။
၂။ လှုပ်ရှားမှုတွင် ခေါင်းဆောင်တင်မြောက်ထားသူများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် လမ်းညွှန်မှုအား တင်္ညတညွတ်တည်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်မှလည်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အခြေအနေကို သုံးသပ်ပြီး မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကျန်သူများအပေါ် ပြတ်သားရဲရင့်စွာဖြင့် လမ်းညွှန်ဦးဆောင် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့စီစဉ်ထားသော လူများအတွက်သာမက ထပ်မံပေါင်းစပ်လာသော ပြည်သူများကိုပါ လက်တွဲခေါ်ယူပြီး စနစ်တကျ စီစဉ်လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးပါတယ်။
၃။ မိမိအမာခံလူများနှင့် ရန်သူဘက်မှ သပ်လျှိုဝင်ရောက် ဖျက်စီးနိုင်သည့်သူများအား ခွဲခြားသိမြင်စေရန်အတွက် မိမိတို့ အချင်းချင်း သိသာသည့် အမှတ်အသား စကားဝှက်များကိုလည်း စီစဉ်ထားရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် ရန်သူအား သိသာစေသည့် မြင်သာစေသည့် အမှတ်အသားများကို မပြမိစေရန် အရေးကြီးပါတယ်။
၄။ ရန်သူနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် ဖြိုခွင်းမှုကြုံရချိန်တွင် မည်သို့ သော လုပ်ဆောင်မှုများ လုပ်မည်ကို မိမိတို့အနေဖြင့် အထူးသဖြင့် ဦးဆောင်သူများအနေဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည်။ အဆင့်ဆင့် သတ်မှတ်၍ အရေးပေါ် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လက်ဆင့်ကမ်း အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် နည်းပုံစံအားလည်း ပြင်ဆင်ထားရမှ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်သင့်သော အချက်မှာ (မြန်မာပြည်တွင် ဖြစ်လာခဲ့သမျှသော ရန်သူနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများတွင် ရန်သူဘက်မှ တစ်ဘက်သတ် အင်အားသုံး အကြမ်းဘက်ဖြိုခွဲမှုကြောင့် ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ကာ ပြိုကွဲခြင်းများဖြင့် ကြုံတွေ့ ရခြင်းကြောင့်၊ မိမိတို့ အင်အားများ တတိတိဆုံးရှုံးရခြင်းတို့ ကြောင့်) နောက်နောင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် လူထုလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှတွင် ညီညီညာညာဖြင့် ခုခံကာကွယ်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သမျှသော လူထုလှုပ်ရှားမှုများနှင့် မြန်မာသမိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သမျှသော အောင်မြင်ခဲ့သည့် တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှတွင် အင်အားသုံးအကြမ်းဘက်ဖြိုခွဲသော ရန်သူအား ခုခံကာကွယ်တုန့် ပြန်ခဲ့၍သာ အနိုင်ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူထုအင်အင်ဟာ အကြီးမားဆုံး အင်အားဖြစ်ပါတယ်။ လူထုအင်အားနဲ့ရန်သူအင်အား ယှဉ်ကြည့်ရင် အရေအတွက် အများကြီး ကွာခြားပါတယ်။ လူထုမှာ မိမိအင်အားကို စုပေါင်းအသုံးချနိုင်ဖို့ ဘဲ လိုအပ်ပါတယ်။ အင်အားနည်းတဲ့ ရန်သူမှာ လက်နက်ရှိလို့အင်အားကြီးတဲ့ လူထုက ငုံ့ ခံနေရတယ်ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်သင့်သလို တကယ်ဆိုရင် မမှန်ကန်ပါဖူး။
အင်အားနည်းတဲ့ ရန်သူက လက်နက်နဲ့ အနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုရင် ပြည်သူလူထုကလည်း လက်နက်နဲ့အနိုင်ရအောင် လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ လက်နက်ဆိုတာ သေနတ်မှ လက်နက် မဟုတ်ပါဖူး။ ပြည်သူလူထုမှာ လက်နက်တွေ ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ အများကြီး ရှိဖို့ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက စိတ်ဓါတ်လက်နက်၊ ညီညွတ်မှုလက်နက်နဲ့ရဲရင့်တဲ့ လက်နက်တွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အပြင် လက်တွေ့ ကျတဲ့ လက်နက်တွေကတော့ မိမိတို့ နေ့ စဉ်နဲ့အမျှ သုံးစွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာ လက်နက်တွေပါဘဲ။ မိမိတို့ အိမ်တိုင်းမှာ ဒါး ရှိပါတယ်။ မိမိတို့ အိမ်တိုင်းမှာ မီး ရှိပါတယ်။ မိမိတို့အိမ်တိုင်းမှာ သံ ရှိပါတယ်။ မိမိတို့ အိမ်တိုင်းမှာ ဓါတုဆေးဝါးတွေ ရှိကြပါတယ်။ မိမိတို့သွားရာလာရာ လမ်းတွေမှာလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဒါတွေကို သူ့ နေရာနဲ့ သူ ရန်သူကို ရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ ထိထိရောကရောက် အသုံးပြုရင် လက်နက်ပါဘဲ။
အဓိကကတော့ မတရားအနိုင်ကျင့် အကြမ်းဘက်ဖြိုခွဲတာကို ငြိမ်မခံပါနဲ့ ။ တစ်ခါအရိုက်ခံရရင် ရန်သူက နှစ်ခါ ထပ်ရိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ရန်သူက တစ်ယောက်ကို ဖမ်းရရင် နောက်တစ်ယောက်ကို ဆက်ဖမ်းပါလိမ့် မယ်။ ရန်သူက တစ်ယောက်ို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပစ်လို့ ရရင် နောက်တစ်ယောက်ကို ထပ်ပစ်ပါလိမ့် မယ်။ ဒီတော့ မိမိအနေနဲ့ရန်သူရဲ့ အကြမ်းဘက်မှုကို ခံရတဲ့ ပထမဦးဆုံးသူ မဖြစ်စေပါနဲ့ ။ နောက်လူလည်း မဖြစ်ပါစေနဲ့ ။ တစ်ဦးချင်းအရရော လက်တွဲပြီးစုပေါင်းလို့ ရော အကြမ်းဘက်လာရင် ပြန်ခုခံပါ။ ကာကွယ်ပါ။ လက်တုန့် ပြန်ပါ။ ဒါဟာ မိမိတို့ က အကြမ်းဘက်တာ မဟုတ်ပါဖူး။ အကြမ်းဘက်တာကို ကာကွယ်ခုခံတာဆိုတာကို လက်ခံယုံကြည်ရပါမယ်။
ဒီလို အလွယ်တကူ အဖမ်းမခံရအောင် အရိုက်မခံရအောင် ပစ်ခတ်တာ မခံရအောင် ရန်သူဘက်က သုံးလာတဲ့ အတိုင်း ပြည်သူတွေဘက်ကလည်း ပက်ဖြန်းဆေးတွေ (Spray) တွေ၊ လောက်လေးဂွတွေ၊ ဒါးအတိုတွေ၊ ဒုတ်အတိုတွေ၊ ကြိုးတွေကို လူတိုင်းအားလုံးက ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ ကျည်မပေါက်နိုင်တဲ့ သံအထူနဲ့ တစ်ကိုယ်စာ ဒိုင်းအကာတွေ လုပ်ထားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတရားအကြမ်းဘက်မှု ဖြိုခွင်းမှုကို ငုံ့ ခံလို့မရပါဖူး။ လူတိုင်းမှာ မိမိရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံမှုကို ထိပါးလာစေမယ် ထိခိုက်နာကျင်စေမယ်ဆိုရင် ခုခံကာကွယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ တရားသော ခုခံကာကွယ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးရဲ့ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဟာ ဒီလူတစ်ဦးအတွက် ရှိသင်ရှိထိုက်တဲ့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေက လက်ခံသတ်မှတ်ထားပါတယ်။
မတရားအကြမ်းဘက်တဲ့ ရန်သူကို ခုခံကာကွယ်ပါ။ ငုံ့ မခံဘဲ တုန့် ပြန်ပါ။
မိမိအနေနဲ့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သင့်တာတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ ရှောင်သင့်တာတွေ ဆောင်သင့်တာတွေကို ကြိုတင်စီစဉ်ပါ။
အင်အားသုံးပြီး ဖြိုခွဲဖို့ လာတဲ့ အကြမ်းဘက်သမားတွေကို ပြန်လည်ဖြိုခွဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သည်းခံခြင်း၊ ငြိ်မ်ခံခြင်း၊ ငုံ့ ခံခြင်း၊ ဖြောင်းဖြခြင်း၊ တောင်းပန်ခြင်း၊ အလျှော့ ပေးခြင်းသည် ရက်စက်ယုတ်မာသော ရန်သူနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင် လုပ်ရမည့် အလုပ်မဟုတ်။
ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ရန်သူမှာ အကြင်နာနှလုံးသားနဲ့ဖြူစင်ရိုးသားမှုဆိုတာ မရှိဘူး။ လုပ်ရမှာ လုပ်သင့်တာ တစ်နည်းဘဲ ရှိတယ်။ ရန်သူက အကြမ်းဘက်လာရင် ပြန်ချ။
(ရေးသားသူ – နစ်နေမန်း)။
ဖိုင်အား ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် – http://sharebee.com/f60c464e
This entry was posted on Friday, May 15th, 2009 at 3:36 am and is filed under Posts.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.